I-Funky, ikhabethe elilungele umndeni - I-Airbnb
I-Funky, ikhabethe elilungele umndeni
Hancock, Vermont, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Susan
Indlu yethu ejabulisayo, ejabulisayo itholakala ehlathini, inempophoma nomfudlana ogijima ngaphandle kodonga olukhulu lwamafasitela. Itholakala eziNtabeni Eziluhlaza, lena indawo ekahle yokuphumula nokudlala. Uhlelo olukhulu lwesitezi esivulekile lulungele imindeni enezingane ezifunda isikole. Imindeni enezingane ezisacathula ingase ingalitholi ikhaya lethu njengelinobungane, njengoba impophoma, indawo ephezulu kanye nezakhiwo zasepulazini ezinamathiselwe zingadala izinselele zokuphepha.
Ikhaya lethu leholide elikhulu, eliphansi elivulekile linalokho kanye okudingayo! Imizuzu engama-30 ukusuka ezindaweni ezimbili ezinkulu zokushushuluza - eKillington naseSugar Bush kanye nemizuzu emihlanu ukusuka eMiddlebury Snow Bowl, indlu yethu ejabulisayo nejabulisayo inompheme omkhulu wokufunda nokulalela impophoma yakho, indawo ethokomele ngaphansi kodonga lwamafasitela ukuze ubuke. izinkanyezi ezidubulayo, nazo zonke izinsiza zesimanje ozidingayo (futhi azikho lezo ongazidingi!).
Le ndlu ilala ngokunethezeka abayisishiyagalombili, inesitezi esiphezulu esinama-single amathathu kanye nendlu ekabili, indawo ephansi enegumbi eliphindwe kabili nelixhumene (eliseyingxenye yendawo enkulu evulekile) enye ephindwe kabili. I-Rustic (kodwa ihlanzekile!) Futhi i-whimsical, le ndlu iyindawo yokubalekela ehlathini. Ihlala kumahektha amathathu anomfula wayo, ichibi kanye nokufinyelela emizileni engamamayela enqamula Ihlathi Lesizwe khona kanye nomgwaqo, indlu yethu ikumema ukuthi wehlise ijubane, ugqugquzeleke futhi uthole umsele wakho.
Ngezinsiza ezifana ne-Wi-Fi, umshini wokuwasha izitsha, iwasha nesomisi nezipikha ezingenantambo ze-iPod/ikhompyutha yakho, unokuthile okudingayo okudingayo. Ngaphandle komabonakude kanye nesevisi yeselula elinganiselwe, unesimemo sokuhlukana kancane nje nomhlaba futhi uthole ukuzola esikudinga ngempela sonke!
Sinamagumbi okugeza angu-1 ½ kanye nebhavu enezinzipho endaweni yokuhlala yabantu abazama ngempela enhliziyweni! Sinegrill yegesi, indawo yokucima umlilo, isibonakude kanye nemidlalo eminingi!
Indlu yethu ilungele imindeni (enezingane ezifunda isikole) nezinja, abangani nokuhleka, injabulo elula nezikhathi ezithule. Woza uzofunda, ubhale, utadishe, uphumule, ushushuluze, ugibele ibhayisikili, ubhukude noma uhlale futhi ujabulele ubuhle bezintaba Eziluhlaza!
4.96 · 280 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-280
Ziningi izindawo ongavakashela kuzo nezinto ongazenza futhi uzibone. I-Middlebury College Snowbowl yokushushuluza ekwehleni, Isikhungo sase-Rikert ekhempasini ye-Breadloaf yokushushuluza eqhweni i-x-country, ukuhamba ngezinyawo yonke indawo ikakhulukazi u-Silent Cliff no-Cliff's wase-Mt Horrid. Umgwaqo omkhulu, ibhayisikili lezintaba nokugibela amatshe. Vakashela i-Rochester, i-Middlebury, i-Warren, i-Waitsfield, i-Burlington, nokuningi.
Sitholakala noma nini uma unezinkinga noma imibuzo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Hancock namaphethelo